Mitolona Manohitra Ny Heloka Amin’ny Fomba Amam-panao Ny Gaboney · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Avrily 2013 15:10 GMT
Nampivandravandra ny lozan'ny famonoan'olona ara-pomba amam-panao ao Gabon ny fandaharana iray amin'ny fahitalavitra Canal Plus. Anisan'ny finoana mahatonga famonoan'olona ara-omba amam-panao ao Gabon ny fakàna taova aminà olona velona iray mba hahafahan'ny olona iray hanana tanjaka kokoa. Efa nisy fahafatesana nampisaona fianakaviana manontolo izany heloka izany ary mampivarahontsana ny firenena manontolo. Nanomboka tamin'ny volana mey 2012, nanome soso-kevitra hametrahana vaomiera hisahana ny tranga niseho hatramin'ny 22 taona lasa ny mpanara-maso ny demokrasia ao an-toerana ary nilaza fa hametraka ity karazana heloka ity ho anatin'ny heloka bevava mandripaka ny Olombelona. Lohalaharana amin'ity tolona ity izany ireo Gaboney.
Fihetsiketsehana manohitra ny heloka amin'ny fomba amam-panao ao Gabon – pikan-tsary tao amin'ny lahatsarin'i garenghem tao amin'ny YouTube
Nisy ny filaharambe hanoherana ity heloka ity izay natao tamin'ny volana janoary tao Lambaréné, nahazo hery ny tolona indrindra tao amin'ny tambajotra sosialy nanomboka tamin'ny nahitana ny vata mangatsiakan'ilay tovovavy kely efa simba tanteraka teny amoron-dranomasina tao andrenivohitra Libreville tamin'ny 19 marsa lasa teo. Tao amin'ny Twitter, nampiasaina ny paingo-teny (hashtag) #OpGabon sy #SOSGabon hanoherana ity heloka mahatsiravina ity sy hitakiana ny rariny ho an'ireo lasibatra.
Tao amin'ny Africamix « la Case à palabres », Olivier Herviaux nanoratra hoe:
Izao no fihetsika iray ahitana ny fomba baribariana izany sy ny fahamaizinan-tsain'ny fiarahamonin'olombelona, iray amin'ireo mamelona ny nofinofy rehetra ao Afrika, any Andrefana ary any an-kafa. Ao anatin'ny fon'ny fahamaizinana tanteraka isika, araka ny nosoratan'i Joseph Conrad.
Emmanuel Kouassi izay nanatontosa fanadihadiana momba ny famonoan'olona ara-pomba amam-panao tao amin'ny bolongany « politique et autres » nanazava hoe :
Ny heloka, raha amin'ny lalàna, dia famonoana olona na fanesorana ain'olona. Araka izany, azo atao ny manasokajy azy ho vono olona, heloka efa nomanina.
Ary ny famonoan'olona ara-pomba amam-panao? Heloka atao mifototra amin'ny fomba fanao, na nentim-paharazana na fomba ara-pivavahana, na kolontsaina na fomba miafina. Amin'izany rehetra izany, atao ny heloka amin'ny fomba amam-panao mba hakàna singa-taova amin'ny vatan'olombelona iray, ho atao sorona ; na koa ampiasaina amin'ny fombafomba fotsiny. Indrisy fa mankafy izany fomba fanao izany ny olona sasany mba ho lasa mpanefoefo, araka ny filazan'ireo olona marobe. Ny mpanoro-hevitra voalohany azy ireo dia: ireo mpisorona na ireo mpimasy. Samy manana ny mpisorona na ny mpimasiny ny tsirairay. Matetika somary mahavariana ihany fa ry zareo ireo ihany. Mitaky loha, lela, taovam-pananahana, hohon-tanana…fò na volon'olombelona, vavy na lahy, ho fikarakarana ny ody…majika. Matetika, ireo olona bobo (albinos) sy ny sembana ara-batana no tena lasibatra.
Tao amin'ny Africamix la Case à palabres ihany, Olivier Herviaux nanohy hoe :
Nandritra ny taona maro, nisongadina tamin'ny lohatenin-gazety ny vono olona ara-pomba amam-panao, indrindra tao Gabon. Tamin'ny 3 mars 2005, vata mangatsiakan'ankizy roa norasarasaina no hita faty tao amoron-dranomasina ao Libreville. Zanaka lahin'i Jean-Elvis Ebang Ondo ny faty iray tamin'izany, izay vao 12 taona. Volana vitsy taty aoriana, nanangana ny Fikambanana manohitra ny Famonoan'olona ara-pomba amam-panao (ALCR) i Jean-Elvis Ebang Ondo.
Manome fanazavana ny habaky ny Reporters Sans Frontières:
Misy ifandraisany amin'ny fivavahan-drazana (animisme) ao Gabon ny famonoan'olona ara-pomba amam-panao, ary mikendry hanamafy ny fahefan'ireo mpimasy amin'ny fandrasarasana ny vatan'ireo olona velona, lehilahy, vehivavy na ankizy, izay tokony ho faty noho ny fanaintainana. Baiko avy amin'ny olona mpanao politika, mateti-pitranga izany vono olona mahatsiravina izany mandritra ny vanim-potoanan'ny fifidianana na ny andro mialoha ny fanovana governemanta, ary matetika mijanona ho tsy misy fanasaziana.
Nisy ny fihetsiketsehana nokasaina natao tamin'ny 13 avril saingy :
Nohajaina tao Libreville ny tsy fandraisan'ny minisitry ny atitany gaboney, Jean François Ndongou, ny fangatahana hanao fihetsiketsehana milamina nalefan'ny Fikambanana manohitra ny famonoan'olona ara-pomba amam-panao (ALCR) sy ireo «Gaboney ao amin'ny Aterineto» izay nokasaina natao tamin'ny 13 Aprily 2013 lasa teo.
Manoloana izany fandàvana izany, nanao fihetsiketsehana ireo am-pielezana (diaspora) :
Herinandro taorian'ny fihetsiketsehana nataon ‘ireo Gaboney ao Lyon izay nidradradradra hoe «tsia amin'ny famonoan'olona ara-pomba amam-panao», nanao torak'izany ihany koa ny tao Paris sy Kanada izay naneho ny fanohanany ireo fianakaviana marobe nisaona ary nanararaotra nisarika ny sain'ireo manampahefana gaboney izay toa tsy mba taitra manoloana izany tranga-javatra izany ary mitady hampiditra ny fomba ao anatin'ny «mety» sy «loza tsotra».
Manoloana izany korontana izany, nanome alalana ny Fikambanana Manohitra ny Famonoan'olona ara-pomba amam-panao (ALCR) ihany ny governemanta nony farany (ALCR), mba hanao fihetsiketsehana milamina ao andrenivohitra Gaboney amin'ny 11 mey hoavy izao. Tsy i Gabon irery no ahitana famonoan'olona ara-pomba amam-panao, fa ny Afrika mainty rehetra izay voakasik'ity vono olona ara-pomba amam-panao ity.